गुणन - सबै रूख | सबै रूखहरू
रूखहरू कसरी बढ्छन्? प्रकृतिमा, त्यहाँ दुईवटा मात्र तरिकाहरू छन्: बीउहरूद्वारा, जुन सबैभन्दा सामान्य हो, वा काट्नेहरूद्वारा; त्यो हो, हाँगाहरू जुन, जब कुनै जनावरको कार्यले भाँचिन्छ, भुइँमा खस्छ र जरा लिन्छ।
मानिसहरूले कलमी गरेर पनि तिनीहरूलाई प्रचार गर्न सिकेका छन्, जुन एउटा प्रविधि हो जसमा एउटै जीनसका दुई बिरुवाहरू (उदाहरणका लागि, प्रुनस) तर फरक प्रजातिहरू (उदाहरणका लागि, हामी बदामको हाँगा कलम गर्न सक्छौं -प्रुनस डुलसिस- चेरी रूखको ट्रंकमा -प्रुनस एभियम- र एउटा रूख हो जसले दुवै प्रकारका फल फलाउँछ)।
अर्को प्रविधि छ स्तरित। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तहहरू छन्: कली, सरल, हवाई, बहु, आदि। यो सिफारिस गरिन्छ, उदाहरण को लागी, जब हाम्रो रूख को एक शाखा छ जसको विशेषताहरु हामीलाई धेरै मनपर्छ, र हामी त्यो शाखाबाट अर्को रूख सरल र प्रभावकारी तरिकामा बनाउन इच्छुक छौं।
यस अवस्थामा, हामी हावाको तह बनाउँछौं किनभने जब यो तयार हुन्छ तब हाँगाको जरा हुन्छ, र त्यो तब हुन्छ जब हामीले यसलाई आमा बिरुवाबाट अलग गर्न सक्छौं। हामीले त्यो हाँगाबाट पनि काट्न सक्थ्यौं, तर कुहिनो संग हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि शाखा सधैं जीवित रहन्छ, किनभने यो रूखबाट अलग हुँदैन जबसम्म यो जरा नलागेको हुन्छ।
त्यसकारण, यदि तपाईं विभिन्न प्रकारका रूख प्रजनन जान्न चाहनुहुन्छ भनेयहाँ हामी तपाइँलाई ती सबै व्याख्या गर्नेछौं।
बीउ द्वारा रूख कसरी पुन: उत्पादन गर्ने?
द्वारा मोनिका सान्चेज बनाउँछ3वर्ष .
रूख जन्मेको देखे जस्तो केही छैन। जतिसुकै अनुभव भए पनि, हरेक पटक मुस्कुराउनु अपरिहार्य छ...